Iibso 4In1 Foldable Wireless Qi Fast Charger Dock Station Oo Loogu Talo Galay Airpods Pro iWatch & Apple iPhone - Rar Bilaash Ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
4In1 Foldable Wireless Qi Fast Charger Dock Station For Airpods Pro iWatch & Apple iPhone
dib u eegista 71
$ 35.99 qiimaha joogtada ah $ 52.99
Color Style2 10W Madow Qaabka 1 15W Caddaan Qaabka 2 10W Caddaan Style1 15W Madow
maraakiibta From CN
Style2 10W Madow / CN Qaabka 1 15W Caddaan / CN Qaabka 2 10W Caddaan / CN Style1 15W Madow / CN
4In1 Foldable Wireless Qi Fast Charger Dock Station Wixii Airpods Pro iWatch & Apple iPhone - Style2 10W Black / CN gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Qalabka Pad wax kululeeya: caag
Astaamaha: Tilmaamaha Bixinta, Kabka, U Adeegsiga Taleefanka, Loo Isticmaalay Smartwatch, Loogu Adeegsaday Dhagaha
Nooca isku xiraha: Nooca C
Dhex-dhexaad ah Fan-qaboojiye: MAYA
Muuqaalka Foomka: Miisaanka Shaqada & suufka
Shahaadada Tayada: ROHS, CE, FCC, CCC
Nooca la Jaan qaadi karo: Apple iPhone
Ugu badnaan Awoodda wax soo saarka: 15W
Multi-function isku dhafan: Iyadoo Holder
Dhumucda saldhigga amarka ee ka hooseeya 0.6 inji markii la duubmayo, waxay qaadataa meel yar. Sarkaalka xeedhada xiraha ayaa istaagaya sidoo kale wuxuu hagaajin karaa qaybta birta ah si ay u taageerto xagasha raaxada leh ee aad rabto. Kaliya hal xarig oo lagaa qaado dhammaan wixii ku saabsan iPhone Apple Watch Airpods, si aad uga dhigto miiskaaga iyo istaagaaga mid nadiif ah. Qalabkan xeedho-xireyaasha wireless-ka ah ayaa ka qaadi kara afar aaladood isla waqti isku mid ah, kaas oo ku habboon noloshaada.
Haystaha xeedho xiraha Universal Desktop Charging Stand 30-degree Ergonomic Design wuxuu u ogolaanayaa dadka isticmaala inay lacag ka qaadaan moobaylkooda. Suunka fiilada wireless-ku wuxuu kugu taageerayaa adiga iWatch, iPhone, iyo Airpods isla waqtigaas iyo hal meel. Khibrada 4 ee 1 Meel xarkaha xarkaha Wireless u eg is haysta oo xarrago leh, si fiican u qurxin qolkaaga jiifka, miiska xafiiska. Qalabkan xeedho-xireyaasha wireless-ka ah ayaa ka qaadi kara afar aaladood isla waqti isku mid ah, kaasoo noloshaada ku habboon.
Suufka lacag la'aanta ah ee lagu rakibo wireless-ka waxaa lagu dhisay qaybo tayo sare leh iyo jajabyo casri ah oo bixiya xakameynta heerkulka, xad dhaafka, iyo ilaalinta xad dhaafka ah, ogaanshaha sheyga qalaad. Waxa kale oo ay si weyn u wanaajin kartaa xawaaraha lacag-bixinta ee dekedda xeedho wireless. Laakiin, fadlan isticmaal adabtarad kugu habboon si aad lacag uga qaaddo.
Qiimaha xarkaha fiilada wireless wuxuu qaataa wax ku oolnimada kharashka badan. 15W xukun deg deg ah oo wireless ah oo loogu talagalay Samsung S20, S20 +, S20 Ultra, Huawei P30 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 20 Pro. 10W lacag la’aan wireless ah Samsung Galaxy Note9 / Note 10 / Note 10 Plus / S10 / S9 / S8 / S7 / S7 Edge. 7.5W qaababka xawaareynta degdegga ah ee iPhone SE2 / 8 Plus / X / XR / XS Max / 11 Pro / 11/11 Pro Max. Lacag-bixinta wireless-ka ayaa laba telefoon ka qaadi kara isla mar. 5W suufka lacag la'aanta ah ee taleefanka ama Airpods Pro. 2W lacag bixinta wireless-ka ayaa u taagan Apple Watch iyo 3W USB port oo loogu talagalay Airpod 1/2 / Pro.
Xidhmada ka mid ahaa:
1 * Saldhigga Lacag-Bixinta wireless-ka ah
1 * User Buugga
1 * Nooca USB - C Cable (adabtarada gidaarka kuma jiraan)
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 71
Furaha jacaylka ust ㅎ caustic non are
Si aad ah ugu talinaynaa! Si lamid ah sawirka, maaddadu waxay umuuqataa mid fiican wayna qabataa shaqada. Waxaa jira dabool xeedho qafiifinta sidaa darteed ha u baahnayn inaad ka walwasho inuu si fudud u dhaawacan yahay. Ama waxaad kaliya ku dhejin kartaa AirPods qeybta lacag la'aanta wireless, waxay u shaqeysay aniga AirPods Pro. Xirmadaan lacag-bixinta ah waxay umuuqataa mid aad u wanaagsan waxaanan qorsheynayaa inaan hadiyad siiyo saaxiibkey halkii aan aniga lafteyda u isticmaali lahaa maxaa yeelay waxaan haystaa iPhone 6s oo aan taageerin lacag-bixinta wireless-ka, iyo kan kale ee iPhone XR wuxuu leeyahay kiis otterbox oo joojiya lacag-bixinta wireless-ka sidoo kale.
Waxay ku timid waqtigeedii, dhammaantood sida ku jirta sharraxa! Waxaan kula talinayaa qof walba!
Waxaa lagu soo oogayaa 2 telefoon, saacad iyo airpods. Taabasho wacan